Na mmiri na-enweghị mmiri, ọ dịghị ihe na-eto, mụta ịnabata oké ifufe nke ndụ gị. - Amaghi ama - Quedia Pedia
Ọ na-ekwu na odida bu ihe di nkpa nke ndu anyi n'ihi na ha na achoputara anyi ka odi nma. Oge ụfọdụ anyị kwesịrị ịghọta eziokwu ahụ na oke mmiri abụghị naanị ibibi ndụ anyị kamakwa iji kpochapụ ụzọ anyị.
Ndụ adịghị abụ akwa akwa Roses ma bụrụkwa mgbe a na-agba ọsọ oche. Ndụ nwere ihe ndị ọ na-ebute ụzọ na nzube ya. Anyị ekwesịghị ịkwụsị inwe olileanya na ntụkwasị obi na Chineke. Anyị kwesịrị icheta na Chineke na-akwado anyị maka ndụ kacha mma na nke nwere nzube site n'inye anyị ụfọdụ nkuzi nke ndụ.
Ọdịda bụ ngwụcha nke ihe ịga nke ọma n'ihi na anyị na-eto naanị site na-emehie ihe. Anyị kwesịrị imejọ ihe n'ihi na ọ bụ naanị na-enyere anyị aka nyochaa ihe kpatara na ebe anyị chọrọ ihe ọjọọ.
Onye ama ama ama na physicist mara mma Albert Einstein kwuru otu mgbe na onye ọ bụla emeghị mmehie ọ bụla anwalebeghị ihe ọhụụ. N’ezie, ọtụtụ n’ime ọdịda nke ndụ bụ ndị dara ada n’oge ikpeazụ kama ịghọta na ha dị nso na-aga n’ihu.
Anyị ekwesịghị inwe ndakpọ olileanya banyere ndụ mgbe anyị hụrụ ọdịda anyị. Nke a bụ n'ihi na naanị ihe na-adịgide adịgide n'ụwa a bụ mgbanwe, usoro ọjọọ a ga-ewepụkwa oge. Anyi aghaghi icheta na mgbe onodu siri ike, obu na nsogbu gha aka. Nke a pụtara na anyị ga-ahọrọ akara aka anyị.
Ọrụ siri ike anyị na mgba anyị bụ n'ezie atụmatụ nke ozi nke ịga nke ọma. Ọ dị mkpa ka anyị nye onwe anyị oge ma nwee ndidi ichere nsonaazụ ahụ. Ihe ọ sọkwara ya bụrụ na ndụ, anyị agaghị enwe nkụda mmụọ.
Ndị mmeri anaghị eme ihe dị iche iche; mana ha na eme ihe di iche. Ndụ bụ ihe niile gbasara etu anyị ga - esi ghọta ma kọwaa mmejọ anyị ma jiri oge na akụrụngwa kacha mma iji wee mee nke ọma, nke ga - eme ka anyị nwee nzọụkwụ dị nso na ihe ịga nke ọma.
Uto na Agụ na Quotes
Ntughari uche banyere ndu
Kwuru okwu Satọde
Gbaghara ndị mmadụ na ndụ gị, ọbụlagodi ndị anaghị akwa ụta maka omume ha. Ijide iwe na-afụ gị ụfụ, ọ bụghị ihe ọ bụla. - Amaghi ama
Onye ọ bụla kachasị eme nke ọma na ụwa a abụghị onye kachasị ike ma ọ bụ nke kachasị ọsọ. Ndị kasị arụ ọrụ mmadụ…
Ihe abuo na akowaputa gi: ndidi gi mgbe enweghi ihe obula na omume gi mgbe inwere ihe nile. - Amaghi ama
Ndụ na-enye anyị ihe ịma aka na onyinye nke ya. Ọ na-eme ka njem anyị dị mma. Site n'ihe a niile, anyị…
Ndidi bụ isi ihe na-eweta ihe ịga nke ọma. Ọ bụrụ na inwetaghị ndidi, ọ ga-esiri gị ike…